Marka aad PC bidbidayaan, xogta soo kabsaday noqon doonaa mudnaanta koowaad. Kabashada Xogta laga drive adag ee kombiyuutar kasta waxaa toogtay software kabashada drive adag ama qalabka hardware kabashada xogta. Inta badan qalabka ku xiran yihiin drive adag iyo xogta la baxey ka qalab hardware dheeraad ah oo ammaan ah oo fiican. Software kabashada Data gabi doono inuu ka soo kabsado xogta haddii xogta ayaa la bedelay iyo hardware kabashada xogta noqon doona doorashada oo keliya inuu ka soo kabsado xogta lumay. Marka la barbar dhigo software, qalab hardware yeelan doonaa heerka sare guusha ee soo kabashada iyo sidoo kale dayactiro drives adag dhaawacan. Iyo qalab drive ugu adag waxay leeyihiin software kabashada xogta ka mid ahaa.
Qeybta 1: bixiyayaasha kit kabashada drive Hard
Qeybta 2: kabashada drive Hard
Haddii aad isku dayday software kabashada xogta iyo soo hooyatay natiijo lahayn, kit kabashada drive adag oo dhan qalabka kabashada sida cable USB, U-disk iyo saxanka dushaad kabashada aad ka soo caawin doonaa. Marka aad dooranayso qalabka kabashada midig, tixgelinta ku habboon waa lagu daray. Bixiyaha A adeeg laysku halayn karo waa in la diiwaan gashan ama liisan si buuxda u xamili kabashada hardware. Qaar ka mid ah wax caadi ah oo inta badan door bidayo bixiyayaasha qalab kabashada drive adag:
macluumaadka badbaadada http://www.salvationdata.com (+86) 2868107757
Shaybaarka xogta hoomboro http://www.dolphindatalab.com (727) 4490891
Casriga ah LC http://www.lc-tech.com 0086-28-69699494
Foreensiga Nano http://www.nanoforensic.com +90 2125068183
Qeybta 2: tababarka soo kabashada drive Hard
Bixiyeyaasha tababarka drive adag yihiin shirkado gaar loo kuwa baro xirfadlayaasha on farsamooyinka ugu wanaagsan ee nabad ah wax kaqabashada xogta ka drive adag computer burburtay ah. Qaar ka mid ah xarumaha tababarka waxaa la helay dhulka halka qaar kalena ay ku siiyaan fasallada tababarka online. In xarumaha tababarka online, macaamiisha waxaa looga baahan yahay lacagta Times qaar ka mid ah fasalada web online dhex videos ama webinars.
Labada labada hababka isgaarsiinta ardayda bixiyaan casharo wax ku ool ah oo ay siiyaan liiska qalabka ugu talinayaa in la isticmaalo habka buuxda uga soo kabsado xogta. In casharka, ardayda baran doonaa sida loo hubiyo dhibaatada drive adag, hanaanka soo kabashada drive adag, iyo sidoo kale sida loo isticmaalo qalabka dib u soo kabashada. Kuwa soo socda ayaa lagula talinayaa in adeegyada tababarka u soo kabashada xogta ka cajaladaha adag:
Bixiyeyaasha adeegga Tababarka
My Hard Drive dhinteen http://www.myharddrivedied.com 678-455-9007
Machadka ammaanka Information http://www.infosecinstitute.com (866) -471-0059
Kabashada xogta DTI http://www.dtidata.com/training.htm (866) -438-6932
Kabashada xogta foreensiga Qaranka http://www.national-forensic-data-recovery-training-center.net/ + 1-775-323-3282
Machadka tababarka Cbit http://www.cbit.com.au 1300-55-33-24
My Hard Drive dhinteen waa koox xirfadeed drive adag soo kabashada. Waxay bixisaa adeegyada kabashada xogta shakhsiyaadka iyo shirkadaha, iyo sidoo kale adeega tababarka soo kabashada drive adag ee xirfadlayaasha si loo hagaajiyo xirfadaha ay. Si aad kuwa dhakhaatiirta cusub ee soo kabashada xogta, My Hard Drive dhintay siinayaa shahaadada. Iyadoo ku xiran shuruudaha, Bartayaasha dooran kartaa in aad la tababaray fasalka ama tababar online. Dhab ahaantii waxa kale oo aad ka iibsan kartaa buugaag ay tababar oo ay bartaan keligaa.
Machadka ammaanka Macluumaadka waxaa inta badan ka taagay tababarka. Ma aha oo kaliya ay tababar ku qaadan doonaan ardayda u soo kabashada xogta laakiin sidoo kale aad halkan tababar kale oo xirfad computer ka heli kartaa. Kala duwan ka tirsan tababarka ugu horeeya, waxay bixiyaan tababar online, tababar ganacsi iyo sidoo kale tababar dowladda. Sida machad, shahaadada uu noqon doono in ka badan qaadan.
Kabashada xogta DTI sida mid ugu horeysay tan, waa bixiyaha adeegga kabashada xogta. Software Data soo kabashada, adeeg kabashada xogta, iyo tababarka soo kabashada Xog oo dhan waxaa. Adeegga Tababarka kaa qaadi doonaa qaar ka mid ah lacagta oo aad u baahan tahay si ay u leenahay fasallo. Ma jiro fasalka wax ku ool ah oo dhammaan fasalada lagu sameeyo internetka.
Laga soo bilaabo magaca Qaranka kabashada xogta foreensiga, waxaad ogaan doonaan in adeega tababarka inta badan waxaa loogu talagalay hawlaha sharci ah. Waxaa fiican in la yidhaahdo soo kabsaday caddaymo badan data. Iyadoo lagu tilmaamayo ammaanka, dhammaan fasalada ka soo qaybgeli doona in shaybaar tababarka. Sidaas daraadeed waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaan sida arday hore. Sidaasaa hawshii tani waxa keliya oo la heli karo dalka Maraykanka.
Machadka tababarka Cbit waa adeeg tababarka ee Australia. Marka laga reebo adeegyada tababarka, waxa kale oo aad ka heli kartaa khubaro si ay kaaga caawiyaan in aad ka soo kabsado aad xogta drive adag si toos ah. Iyadoo kasta fasallada tababarka, tababaraha la soo daabici doonaa soo baxay isbarasho ay. Koorsooyin kala duwan mas'uul ka duwan yeelan doonaan. Forensic koorsooyin adag drive ayaa sidoo kale ka mid ahaa in tababarka.
Maxaad samayn lahayd in shil gaari ku adag?
Sidee inuu ka soo kabsado xogta laga baabuur waxyeelo adag
Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka cajaladaha Dell Hard
> Resource > Hard Drive Tools> Dhamaan Hard Drive Recovery Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato